Ababaleki baphikelela eBritain kumnyama kubovu - Bayede News
Iphodikhasti: Izwe Lithini?
IFrance ithembise ngokuthi izokwengeza ukugadwa kosebe lwayo olusenyakatho, kodwa abafuduki abebegcwele emakamu esikhashana bathi akukho nokuminza okudabukisayo ngayizolo okuzobavimba ekuzameni ukuwela kulolu sebe baye eBritain.
Abesilisa abayishumi nesikhombisa, abesifazane abayisikhombisa kanye nentsha entathu bashonile ngoLwesithathu ngesikhathi isikebhe sabo siphephuka esiteshini, olunye lohambo oluyingozi oluzanywe ngezikebhe ezincane ezigcwele kakhulu abantu ababalekela ubumpofu nempi e-Afghanistan, e-Iraq nangale kwayo. Ukufa kwakhulisa ubutha phakathi kweBritain neFrance, osekuvele kungezwani ngeBrexit. UNdunankulu uBoris Johnson uthe iFrance inephutha kanti uNgqongqoshe Wezangaphakathi waseFrance uGerald Darmanin wasola iBritain “ngokuphatha kabi kwabokufika”.
UMengameli u-Emmanuel Macron uvikele okwenziwa yiParis kodwa wathi iFrance iyizwe elingumgudu labafuduki abaningi futhi kudingeka ukubambisana okwengeziwe kwe-Europe ukuze kuliwe nokufika kwabantu kwamanye amazwe ngokungemthetho. “Ngisho ngokusobala ukuthi amasosha ethu ezokuphepha abuthelwa ubusuku nemini,” kusho uMacron ngesikhathi evakashele inhlokodolobha yaseCroatia iZagreb, ethembisa “ukuhlanganisa okukhulu” kwamasosha aseFrance, namasosha angamasosha namadroni abukele ugu. “Kodwa ngaphezu kwakho konke, sidinga ukuqinisa ukubambisana … neBelgium, iNetherlands, iBritain kanye neKhomishini yase-Europe.”
UJohnson ngokuhamba kwesikhathi ngoLwesine umemezele ukuthi uthembise ukuhlangana noMacron nabanye abaholi base-Europe ukuze baxoxe ngezinyathelo ezinhlanu athe zinganciphisa ukuwela. Bahlanganisa ukugada okuhlanganyelwe ukuvimbela izikebhe eziningi ukuthi ziphume emabhishi aseFrance kusukela ngesonto elizayo, zisebenzisa izinzwa kanye nerada nomsebenzi osheshayo esivumelwaneni sokubuyisela neFrance kanye nesivumelwano esifanayo ne-European Union, kusho uJohnson.
“Lokhu kuzoba nomphumela osheshayo futhi kuzonciphisa kakhulu – uma kungayeki – ukuwela, ukusindisa izimpilo, ngokwephula imodeli yebhizinisi yamaqembu ezigebengu,” kusho uJohnson encwadini ayithumele kuMacron futhi yashicilelwa kuTwitter. Ngenkathi iBritain ishiya i-EU, ayizange isakwazi ukusebenzisa uhlelo lweBloc ukubuyisela abafuduki ezweni eliyilungu lokuqala abangena kulo.
‘Mhlawumbe sizofa’ NgoLwesithathu kwakuyisigameko esibi kunazo zonke esike sabhalwa emgwaqeni ohlukanisa iBritain neFrance, okungenye yemizila yemikhumbi ematasa kakhulu emhlabeni. Kepha abafuduki ekamu elincane lesikhashana emaphethelweni eDunkirk, eduze nogu lolwandle, bathi bazoqhubeka nokuzama ukufinyelela eBritain, noma ngabe kungaba yini ubungozi.
Isalokhu ibambene ngesivumelwano senuzi phakathi kwe-Iran ne-USA
“Izolo kuyadabukisa futhi kuyethusa kodwa kufanele sihambe ngesikebhe, ayikho enye indlela,” kusho uManzar oneminyaka engama-28 ubudala, umKurd wase-Iran, egcwele ukuzimisela eduze kwabangane abambalwa. “Mhlawumbe kuyingozi, mhlawumbe siyafa, kodwa mhlawumbe kuzobe kuphephile. Kufanele sizame ithuba lethu. Kuyingozi, sesivele sazi ukuthi kuyingozi. ” UManzar uthe ushiye e-Iran ezinyangeni eziyisithupha ezedlule wafika eFrance ezinsukwini ezingama-20 ezedlule, ngemuva kokudabula i-Europe.
IBritain iphinde yathembisa ukuthi izoba namapatroli ahlangene eBritish-French ogwini lwaseFrance eduze kwaseCalais.
Bayede News Dec 3, 2021